Ireo Libaney Bilaogera Tamin’ny Herinandron’ny 06/03/06: Tsy Finoana Sy Fahatsapàna Tsindrimandry, Fa Ny Fiainana Mitohy Ihany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2017 7:53 GMT
Herinandro talohan'izao, nanoratra aho momba ny tsy fahatokiana anànan'ireo Libaney bilaogera mahakasika izay ho vokatr'ilay Dinika Nasionaly. Toy ny nahatsapàn-dry zareo tsy fitonian-tsaina, nitranga ilay izy: nandao teny anelanelan'ny fotoana ny fifampidinihana ny iray isan'ny goavana tamin'ireo politisiana tao am-pivoriana, ary nandray sidina nankany Washington, toerana nanaovany fanambaràna momba izay tsapany ho hafahafa avy amin'ilay antoko iray hafa. Natsahatra avy hatrany ilay fihaonana, ary voalahatra hitohy ny Alatsinainy aorian'io. Tsy nahagaga ireo Libaney bilaogera ilay lalaon'ny fifanilihana tsiny nanaraka avy eo, ary nanoratra tamin-katezerana sy hadisoam-panantenana ry zareo. Saingy taty aoriana dia nihetsika izy ireo ary nanomboka nanoratra niresaka zavatra hafa.
Zadigvoltair avy amin'ny Beirut Notes nanombatombana hoe:
Hisy hatrany ny fihenjanana ao Libanona mandra-pisian'ny faharesena ara-tafika sy ara-politika an'i Iràna na i Etazonia any amin'ny faritra. [..] Toa i Libaniona no notondroin'i Nietzche rehefa niteny izy hoe: “Ny fanantenana no ratsy indrindra amin'ny haratsiana rehetra, satria mampitarazoka ny adin-tsain'ny olona”.
Nirotsaka nanatevina ilay fientanentanana amin'ilay zava-manahirana ihany koa ny haino aman-jery nahazatra ary nanararaotra nanilika hadisoana tamin'ireo politisiana. Lebanon.Profile avy amin'ny “Lebanese Political Journal” sy Mustapha avy amin'ny The Beirut Spring samy nanamarika lahatsoratra iray voasoratra tamin'ny fomba hafa avy amin'ny mpanadihady iray izay namelively ny iray tamin'ireo politisiana. Lazarus avy amin'ny Letters Apart manasongadina ny anjara toeran'ny haino aman-jery amin'ny famahànana tsy fifampitokisana eo amin'ireo ankolafy samihafa. Manondro sary iray nofinidin'ny gazety iray ho avoaka izy, sarin'ny filoha Amerikàna George W. Bush nitafa tamin'ny fahitalavitra Libaney. Nomarihan'i Lazarus fa nanjavozavo ny sary teo amin'ny fotoana nitenenan'Ing Bush indrindra ny hoe “Fandriampahalemana miaraka amin'i Israely”, narahan'ny dikany tamin'ny teny Arabo.
Raja avy amin'ny The Lebanese Bloggers mihevitra hoe Nanandra-tena ihany ireo Libaney. Amin'ny teny hafa dia nanomana ny sainy hiady ny Libaney.
Saingy ny vinavina matroka avy amin'i Raja dia toa tsy nifampikasika loatra tamin'ireo Libaney bilaogera hafa, izay manana fitondrantena manao hoe “mitohy ihany ny fiainana”. Ohatra, La La avy amin'ny Land La La nandefa sary telo izay heveriny ho mamintina ny dikan'ny maha-teratany Libaney.
Kais avy amin'ny Beirut To The Beltway no misavasava ravina ny fahalalahana tsy hanaraka finoana ao Libanona:
Satria ny resaka sata manokan'ny tsirairay dia ny fitsaràna ara-pivavahana no mifehy azy, vita hatreo ny an'ireo ray aman-dreny tsy manana fandeferana mpametraka sakana araka ny lalàna sy maoraly eny amin'ny làlana izoran'ireo taranak'izy ireo.
Jamal avy amin'ny Jamal's Propaganda Site manapaka hevitra ny handeha hijery sarimihetsika saingy mahatsikaritra fa voasivana ny ankamaroan'ireo sarimihetsika natolotra hahazo Oscar:
3 amin'ireo sarimihetsika 5 natolotra ho an'ny Sary Tsara Indrindra amin'ny Oscar no tsy ho aseho any anatin'ireo trano fijerena sarimihetsika ao Libanona.* Ny iray noho ny resaka fankahalàna pelaka, ny iray noho ny fankahalàna an'i Israely, ary iray noho ny fahatahorana ny Kilalao afon'ny Silamo.
Ad-Libanaises, bilaogy iray izay ahitàna fandraisana anjara avy amin'ireo vehivavy Libaney, nanoratra “antsa iray ho an'ny maha-vehivay” ho fankalazàna ny Andro Manerantany ho an'ny Vehivavy:
…fotoana iray fanehoana fanajàna, antsa iray ho an'ny maha-vehivavy, fotoana iray hisaintsainana, antso iray ho an'ny fanovàna, eritreritra iray, raki-tsarobidy nokajiana fatratra ho anao: ianareo reniko, anabaviko, zanako vavy, namana, namana virtoaly, vady mpikarakara tokantrano, vehivavy mpivarotra enta-madinika, ianareo mpitsabo nify nampahoryr ny fahazazàna, ireo mpampianatra tsy nolalaina, ireo vahiny nitsiky tamiko teny anaty arabe tototra olona … ianareo, vehivavy “tsotra” ho ahy, mpandrafitra ny tantarako, izay nanefy ahy ho ilay izaho vehivavy amin'izao fotoana izao. Ho anareo rehetra ireo, izao no lazaiko androany, misaotra anareo.
Bilaogera iray, Moussa avy amin'ny Ur Shalim, nandefa lohahevitra iray tena mivantambantana, saingy tena manandanja na izany aza, izay tsy misy nidirany mihitsy tamin'ny resaka Dinika Nasionaly: Manome lesona ho an'ireo mpampianatra.